(tonga teto avy amin'ny Fanahy Masina ao amin' ny silamo)
Ny Rūḥ al-qudus ("fanahy masina"), dia voaresaka ao amin' ny Kor'any, izay fanahy misahana ny fanatanterahana ny asan' Andriamanitra na ny fampitana ny hafatr' Andriamanitra. Ampitovin' ny Kor'any amin' ny روح القدس‎ / Ruh al-qudus ("fanahy masina" na "fanahin' ny fahamasinana") sy amin' ny al-Ruh al-Amin ("fanahy mahatoky") ny rūḥ. Ny Fanahy masina dia matetika heverina ho ny anjely Jibrily (arabo: جبريل‎ / Jibrīl na جبرائيل‎ / Jibrāʾīl "Gabriela"), ilay mpitondra ny hafatra amin' ny mpaminany rehetra.
Ny ankamaroan' ny fitantarana ao amin' ny Hadita dia manao ny Fanahy masina ho ny anjely Jibraily (Gabriela). Ny teny hoe Fanahy (amin' ny teny arabo: الروح / al-Ruh) tsy miaraka amin' ny hoe masina, dia heverina fa ny fanahy mpamorona avy amin' Andriamanitra nentiny namelomana an' i Adama, sady nanindry mandry na nitsilo tamin' ny fomba maro samihafa ireo irak' Andriamanitra toa an' i Jesoa sy i Abrahama.
Ao amin' ny sofisma, ny rūḥ (arwah raha maro) dia ny zavatra tsy mety amin' ny olona, izany hoe ny "fanahy". Ny Kor'any dia tsy manao ny rūḥ ho tsy mety maty. Na dia izany aza, amin' ny toe-javatra sasany dia mampisy aina zavatra tsy manana aina izy. Ankoatr' izany dia aseho ho zavamanana aina am-panoharana toy ny anjely izy. Misy koa ny andalana ampitoviana ny rūḥ amin' i Isa (na Jesoa).
Ivelan' ny Kor'any, ny rūḥ dia ilazana fanahy izay mirenireny ety ambonin' ny tany; matoatoa. Ao amin' ireo al-Laṭaʾif as-sitta (arabo: اللطائف الستة‎ ) dia izy no fahadiovana fahatelo.
Amin' ny ankapobeny, ny fahazaoan' ny Miozolmana ny Fanahy masina dia tsy mitovy amin' izay mifototra amin' ny Testamenta Taloha sy Vaovao an' ny jodaisma sy ny kristianisma. Ny finoan'ny Kristiana sasany ny Trinite izay manao ny Fanahy masina ho Andriamanitra dia toherin' ny Kor'any ary ataony fa fitenenan-dratsy an' Andriamanitra. Tsy Andriamanitra sady tsy persôna ny Fanahy masina.
1 Rūḥ al-qudus: Fanahy masina
1.1 Ny Rūḥ al-qudus ao amin' ny Kor'any
1.2 Ny Rūḥ al-qudus ao amin' ny silamo siita
1.3 Ny Rūḥ al-qudus: arkanjely Gabriela
2 Ny Rūḥ: fanahin' ny manana aina
2.1 Ny fanahin' ny olombelona
2.2 Ny fanahin' ny maty
Rūḥ al-qudus: Fanahy masinaModifier
Rūḥ al-qudus (arabo: روح القدس‎ "fanahy masina" na "fanahin' ny fahamasinana") sy al-rūḥ al-ʼamin (arabo: الروح الأمين‎ "fanahy mahatoky") ary rūḥ ("fanahy") no teny entin' ny Kor'any milazalaza ny loharano na ny fitaovana ahatanterahana ny fanambaràna ara-paminaniana, izay matetika ampitovina amin' ny anjely Jibrily (Gabriela). Ny mpanao fivoasana ny Kor'any dia tsy mifanaraka momba ny fampiasana isan-karazany ny teny hoe rūḥ ho manondro an' i Gabriela. Ny andian-teny arabo hoe القدس / al-Qudus dia dikan' ny hoe "fahamasinana" amin' ny teny malagasy. Ny hoe al-Quddūs "ny Masina Indrindra" dia iray amin' ireo anaran' Andriamanitra miisa 99 ao amin' ny silamo.
Ny Rūḥ al-qudus ao amin' ny Kor'anyModifier
Ny andian-teny hoe rūḥ al-qudus, izay adika hoe "fanahy masina" na "ny fanahin' ny fahamasinana" dia miseho inefatra ao amin' ny Kor'any, ao amin' ny Kor'any 2.87 sy 253, Al-Ma'idah andininy faha-110, ary An-Nahl andininy faha-102. Intelo no ilazana azy ho fitaovana izay tamin' ny alalany no nampahatanjahan' Andriamanitra an' i Isa (na Jesoa), ary ao amin' ny fahefatra no anondrona azy ho ilay nampidina ny fahamarinan' Andriamanitra amin' ny mpaminaniny.
Ny Miozolmana mpanao heviteny sasany dia mampifandray an' io andian-teny io amin' ny al-ruh al-amin "fanahy mahatoky" izay voalaza fa nampidina ny Kor'any araka ny andininy 26.193, ary ampitovina amin' i Jibrily na Gabriela.
Ny Miozolmana mpanao heviteny sasany dia mihevitra azy ho mitovy amin' ny fanahy noforonina resahina ao amin' ny andininy hafa ao amin' ny Kor'any ho ny fitaovana izay nampodian' Andriamanitra an' i Adama ho manana aina (ohatra: 15.29), izay nahatonga an' i Maria ho bevohoka an' i Jesoa (21.91), ary nanindry mandry (nitsilo) ny anjely sy ny mpaminany (ohatra: 17.85). Ny fanahy izay niaraka amin' ny "anjely" nidina sy niakatra any amin' Andriamanitra (16.2; 70.4; 97.4) dia heverina fa i Gabriela ihany koa araka ny hevitr' ireo mpanao heviteny amin' ny Kor'any. Araka izany, ny anjely Gabriela no lasa ivom-pandinihana ara-teôlôjia momba ny votoatin' ny fanambaràna sy ny fomban' ny fahafaha-mahalala koa, ka amin' izany dia sarahana ny saina sy ny fanambaràna ara-paminaniana ary ny fahalalana mistika.
Ny Rūḥ al-qudus ao amin' ny silamo siitaModifier
Ao amin' ny siisma, ny rūḥ dia lazaina fa "zavaboarin' Andriamanitra (khalq) izay lehibe noho i Gabriela na i Mikaela", izay nalefa mba hampahalala sy hitari-dalana an' i Mohamady sy ny imam ankehitriny. Ao amin' ny lovantsofina siita sasany, ny ruh al-qudus ("fanahin' ny fahamasinana") dia iray amin' ireo fanahy dimy ananan' ny imam. Tsy tahaka ireo fanahy efatra hafa ny ruh al-qudus izay miambina mandrakariva sady vonona ny hampahalala zava-misy amin' ny imam momba ny lohahevitra rehetra. Misy ny tsy fifanarahan-kevitra ny amin' ny filazana ny rūḥ ho anjely na tsia.
Ny Rūḥ al-qudus: arkanjely GabrielaModifier
Ny andian-teny hoe Rūḥ al-Qudus koa dia ampiasaina hanondroana ny arkanjely Gabriela, izay lazaina ho ny Anjelin' ny fanambaràna sy notendren' Andriamanitra hanambara ny Kor'any amin' ny mpaminany Mohamady ary nanambara tamin' i Maria ny hahaterahan' i Jesoa.
Ao amin' ny soràta izay ampahatsiahivan' ny Kor'any ny anjely Gabriela dia lazainy amin' ny anarany izy. Na dia izany aza, ny hadita sasany sy ny ampahany amin' ny Kor'any dia azo anohanana fomba fijery hafa.
Ny Kor'any, ao amin' ny sorata Maryam, ayat 16–21, dia toa manondro ny anjely Gabriela ho nanome an' i Maria, izay mbola virjiny, ny vaovao momba ny hananany zanaka:
Nisafidy ny hisitaka (amin' ny vahoakany) izy [i Maria]; avy eo nalefanay any aminy ny Fanahinay, ary niseho teo anatrehany izany tamin' ny endri-dehilahy amin' ny hajany rehetra. Hoy izy [i Maria]: "Marina! Mila fialokalofana ao amin' (Andriamanitra) Mahery Indrindra aho tsy ho eo aminao, raha matahotra an' Andriamanitra ianao". Hoy izy (ilay lehilahy): "Mpitondra hafatra fotsiny avy amin' ny Tomponao aho, (hanambara aminao) ny fanomezana anao zanakalahy marina". Hoy izy (Maria): "Ahoana no hananako zanakakahy, raha tsy misy lehilahy mikasika ahy, ary raha tsy ratsy fitondran-tena aho?" Hoy izy (ilay lehilahy): "Noho izany (ho tanteraka izany), hoy ny Tomponao: 'Mora amiko (Andriamanitra) izany: Ary (maniry izahay) hanendry azy ho famantarana ho an' ny zanakolombelona sy ho famindram-po avy aminay (Andriamanitra), ary zavatra (efa) nodidiana (Andriamanitra) izany' ". (Kor'any 19:17).
Taterina ao amin' ny hadita maro fa ny anjely Gabriela dia niara-nadehatamin' i Mohamady nandritra ny Mi'raj, fiakarana any an-danitra izay ilazana fa nihaonan' i Mohamady amin' ny mpitondra hafatr' Andriamanitra sy nantoroana ny fomba fivavaka silamo, dia ny sujud (Bukhari Sahih al-Bukhari, 1:8:345 .). Tohanan' ny Miozolmana koa fa ny anjely Gabriela dia nidina tety an-tany tamin' ny alin' ny Laylat al-Qadr, izay alina amin' ny folo andro farany amin' ny volana masin' ny Ramadany, izay lazaina fa alina nanambaràna voalohany ny Kor'any.
Ny Rūḥ: fanahin' ny manana ainaModifier
Ny fanahin' ny olombelonaModifier
Andriamanitra dia inoana fa nanome ny olombelona rūḥ sy nafs (نَفْس). Ny rūḥ dia "mitarika" ny nafs, izay mahafaoka ny faniriana voafetran' ny fotoana sy ny fahatsapan' ny taovam-pandrenesana. Afaka mifehy ny vatana ny nafs raha resin' ny filan' ny vatana ny rūḥ. Iharan' ny fanirian' ny vatana ny nafs, fa ny rūḥ kosa dia ny maha izy azy tsy azo tsapain-tanana ao amin' ny olona, izay tsy azon' ny fiontanam-po sy ny saimbatana itovian' ny olombelona sy ny biby hafa; ny rūḥ no mahatonga ny vatana ho velona. Ny arwah (endrika maron' ny teny hoe rūḥ) sasany dia monina ao amin' ny lanitra fahafito. Tsy mitovy amin' ny anjely ny arwah izay inoana fa mihinana sy misotro. Ny anjely antsoina hoe Ar-Rūḥ ("ny Fanahy") no tomponandraikitra amin' izy ireo.
Ny fanahin' ny matyModifier
Ny mpanoratra miozolmana toa an' i Ghazali sy i Ibn Qayyim ary i Suyuti dia nanoratra amin' ny antsipiriany maro momba ny fiainan' ny matoatoa. I Ibn Qayyim sy i Suyuti dia nanambara fa rehefa te hiverina ety an-tany elaela ihany ny fanahy iray, dia afahana miandalana amin' ny fameran' i Barzakh (katazana limbo, sakana manelanelana ny velona amin' ny any an-koatra) ary afaka mifindra toerana malalaka. Ny fanahy tsirairay dia manandrana ny fiainana aorian' ny fahafatesana araka ny ny asa sy ny toetrany tao amin' ny fiainany tety an-tany. Ny fanahy ratsy dia hahita ny any an-koatra misy fanaintainana sy sazy, voagadra mandra-pamelan' Andriamanitra azy ireo hifanerasera amin' ny hafa. Ny fanahy tsara kosa dia tsy hiharan-teritery. Malalaka izy ireo amin' ny fitsidihana ny fanahy hafa ary afaka midina amin' ireo faritra ambany aza. Ireo drafitra ambony dia heverina fa malalaka kokoa noho ireo drafitra ambany, ny farany ambany no tery indrindra. Ny eran' ny fanahy dia tsy heverina ho araka habaka, fa ahitana taratra ny fahafahan' ny fanahy. Arakaraka ny fihadiovan' ny fanahy no ahafahany mifandray bebe kokoa amin' ny fanahy hafa ary ananany fahalalahana lehibe kokoa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rūḥ&oldid=1037768"
Dernière modification le 13 Septambra 2021, à 12:30
Voaova farany tamin'ny 13 Septambra 2021 amin'ny 12:30 ity pejy ity.